​Puntland: Xafladda Wareejinta Dekedda Boosaaso oo socota
BOOSAASO, Puntland- Munaasabad lagu wareejinayo dekedda Boosaso ayaa hadda ka socota magaalada ganacsiga ee xarunta u ah gobolka Bari magaalo madaxda ganacsiga Puntland.
Wararka warsidaha Garowe Online ka helayo dekedda ayaa sheegaya in munaasabadda wareejinta ay goob joog ka yihiin mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland iyo shirkadda maamuli doonta dekedda ee P&O Port.
Amniga ayaa aad loo adkeeyay, waxaana sidoo kale si caadiya u shaqaynaysa dekedda iyadoo munaasabadda lagu qabanayo qaybta Negfish.
Sidoo kale waxaa hoolka xafladda jooga nabadoono, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Muddo soddon sano ah ayaa P&O Port maamuli doontaa Dekedda Boosaaso iyadoo ku samayn doonta Ballaarin, Dib u casriyayn islamarkaana la jaanqaad siin doonta dekedda caalamiga ah.
Hadda waxaa ganacsato ka cabanayaan in dekedda aysan kusoo xiran karin Maraakiib waaweyn sababo ay ku sheegeen in ciid soo buuxisay xeebta iyo goobihi ay istaagi jireen gaadiid badeedka shixnadda halka aysan gabi ahaanba badeecada ku jirta Container aysan imaan karin Puntland taasoo ganacsatada u isticaamaasho dekada magalaada Berbera.
Heshiiskan oo uu qalinka ku duugay Madaxweyne Gaas sannadkan dhexdiisa ayaa ku kacaya Adduun lacageed oo gaaraya 336 Milyan oo doollar.
Goor sii horaysay Wareejinta dekedda Boosaaso Madaxweyne Gaas ayaa ku tilmaamay guul usoo hoyatay shacabka Puntland isagoo ugu baaqay inay soo dhaweyaan fursaddan dahabiga ah ee ka qayb qaadanaysa hormarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Dekada Berbera ayaa waxaa sidoo kale maamulka doonta shirkada DP world halka dekada magalaada Muqdishu ay maamusho shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
Faah faahinta warkaas dib ayaan idiin kasoo gudbin doonaa Haddii ALLE idmo
​Puntland: Maamulka Dekedda Boosaaso oo la wareejiyay [Daawo]
Puntland 12.10.2017. 16:55
BOOSAASO, Puntland- Waxaa maanta si rasmi ah dowladda Puntland u wareejisay maamulka dekedda Boosaaso oo ay gacanta ku hayn doonto shirkadda shirkadda P&O Port, taasoo dayactir iyo ballaarin ku samayn doonta.
Xaflad lagu wareejinayay dek ...
​Puntland: Koofi oo booqday Garoonka Diyaaradaha Boosaaso
Puntland 09.10.2017. 20:28
Wasiirrada Puntland oo taageeray shirka Kismayo
Puntland 05.10.2017. 20:34
Puntland oo xabsiga ka sii daysay 4 qof
Puntland 19.10.2017. 23:03
Puntland: Gurmad laga sameeyay Masaajid ku yaalla Garoowe
Puntland 19.10.2017. 22:35
Puntland oo Dawo iyo Dhaqaatiir u dirtay Muqdisho [Sawirro]
Puntland 18.10.2017. 13:11
​Soomaaliya: Waare “Nidaamka Federaalka kuma Raaxaysanayno”
Soomaliya 10.10.2017. 00:53
Maxaa ka jira in South Sudan ay Masar siisay dhul laga dhiso saldhig ciidan? 04.06.2020. 13:40